दुई प्रेमी ५० प्रेमिका ! पोखराका ३० ठगिए – Peacepokhara.com
ताजा अपडेट आज अर्मलाको ठुलीवेसी फाटमा १४ औं रोपाई महोत्सब | 29 Jun 2017 आज असार १५, धान दिवस | 29 Jun 2017 पोखरामा स्मार्ट लाइसेन्स आयो तर आवेदक लिन आएनन् | 28 Jun 2017 हातले बम समातेर फ्याक्ने सहासी हबल्दारलाई पुरस्कृत गर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा | 28 Jun 2017 दोस्रो चरणको चुनावमा ७० प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान | 28 Jun 2017 दुई प्रेमी ५० प्रेमिका ! पोखराका ३० ठगिए 07 Jan 2017 Leaveacomment काठमाडौं २३ पुस । झापा शनिअर्जुन घर भएका नेत्रप्रसाद गिरीले ५० भन्दा धेरै युवतीलाई प्रेमिका बनाएर ठगी गरिसकेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । उनले रविन केसी भन्ने पाँचथर फैलचाका रविनकुमार चिमोरियासँग मिलेर प्रेमिका बनाएर ठगी धन्दा चलाउँदै आएका थिए । सिआइबीले गत ८ पुसमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ ।
म्याग्दीकी इन्दु शर्माका श्रीमान्को दुबईमा मृत्यु भयो । श्रीमान्को मृत्युपछि उनी एक्लो जीवन बिताउँदै आएकी थिइन् । गत वर्ष उनको एक्कासि एक आकर्षक पुरुषसँग भेट भयो । गाउँकै खगेन्द्र न्यौपाने नामक भाइमार्फत भेटेका ती व्यक्तिलाई उनले चिनेकी थिइनन् । नाम थियो अभिषेक केसी । केसीले यति मीठो कुरा गरे कि पहिलो भेटमै शर्मा मोहित भइन् ।
भाइलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने सिलसिलामा उनले केसीलाई भेटेकी थिइन् । खाडी देश नभई भाइलाई केसीले पोर्चुगल पठाउने आश्वासन दिए । नियमित भेट हुँदै गएपछि इन्दुलाई उनले काठमाडौं बोलाए । बिहे गरेर पोर्चुगल लिएर जाने विश्वास दिलाए । एकल महिला इन्दुलाई एक आकर्षक र धनी पुरुषले त्यस्तो प्रस्ताव राखेपछि आकर्षित हुनु स्वाभाविक थियो ।
ललितपुरको इमाडोलमा केसीले फ्लाट खोजेर राखिदिए । आफू एक ठूलो व्यवसायी भएको भ्रममा पारेर केसीले इन्दुलाई फसाएका थिए । श्रीमान्को मृत्युपछि आएको १० लाख रुपैयाँ र जग्गा धितो राखेर १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ उनले केसीलाई दिएकी थिइन् । श्रीमान्जस्तै मानेर बिजनेसमा लगाउन भनेर उनले त्यो पैसा दिएकी थिइन् ।
करिब चार महिना उनी त्यसरी केसीसँग काठमाडौंमा बसिन् । तर, चार महिनापछि केसी एक्कासि बेपत्ता भए । धेरै दिनसम्म मोबाइल अफ भएपछि उनको चिन्ता बढ्दै गयो । केही दिनपछि मोबाइल अन हुने उनको आशा कायमै थियो । तर, महिना दिनसम्म पनि मोबाइल नखुलेपछि आफूलाई नयाँ संसार देखाउने केसी ठग भएको निष्कर्षमा उनी पुगिन् । र, उजुरी लिएर गत असारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पुगिन् । भाइलाई पोर्चुगल पठाउन र नयाँ जीवन सुरु गर्ने सपना बनाएकी उनी केसीको नक्कली प्रेममा झन् बर्बाद भइन् ।
इन्दुका भाइ पर्ने खगेन्द्रले जेलमा अभिषेकलाई चिनेका थिए । खगेन्द्र लागुऔषध मुद्दामा त अभिषेक वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा जेल परेका थिए । दुवै जना म्याग्दी कारागारमा रहेका वेला चिनजान भएको थियो । जेलमै अभिषेकले आफ्नो विदेशमा राम्रो कनेक्सन भएको भन्दै विदेश जाने मान्छे खोज्न लगाएका थिए । सोहीअुनसार गत वर्ष असोजमा जेलबाट छुटेलगत्तै अभिषेक र इन्दुको भेट भएको थियो । त्यही भेटले उनको जीवनमा थप दुःख थपियो ।
उनले उजुरी दिएको ६ महिनापछि सिआइबीले केसीलाई पक्राउ गरेको होे । पक्राउ परेपछि मात्र उनले थाहा पाइन्– अभिषेक केसी नाम गरेका युवकको वास्तविक नाम त नेत्रप्रसाद गिरी रहेछ । झापा शनिअर्जुन घर भएका गिरीले इन्दुजस्तै ५० भन्दा धेरै युवतीलाई ठगी गरिसकेको खुलेको छ । रविन केसी भन्ने पाँचथर फैलचाका रविनकुमार चिमोरियासँग मिलेर उनले यस्तो ठगी धन्दा चलाउँदै आएका थिए । सिआइबीले गत ८ पुसमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । सुरुमा पक्राउ गर्दा एउटा मात्र उजुरी आएकोमा पक्राउ गरेपछि पीडितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको सिआइबीकी एसपी मिरा चौधरीले बताइन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ५० भन्दा धेरै महिला उनीहरूबाट ठगिएको खुलेको छ । सिआइबीमा दैनिक पीडितहरूको भीड बढिरहेको छ । जसमध्ये १० जनाले सिआइबीमा जाहेरी दिइसकेका छन् । केहीले आफ्नो इज्जत जाने डरले उजुरी दिएका छैनन् । केहीलाई नेत्रले, केहीलाई रविनले त केहीलाई दुवैजना मिलेर ठगी गरेका थिए । नाटकीय शैलीमा उनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै युवतीलाई प्रेममा फसाउँदै ठग्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
रिनासँगको नक्कली प्रेम महोत्तरी बर्दिबासकी रिना कार्की पेसाले स्वास्थ्यकर्मी हुन् । गत असारमा उनी ललितपुरको इमाडोल बस्ने साथीको डेरामा गएकी थिइन् । सोही फ्लाटमा रविन केसीसमेत बस्दथे । साथीकै डेरामा जाने क्रममा केसीसँग उनको चिनजान भयो । त्यो चिनजान केही दिनमै बाक्लियो । रिनाको खासै राम्रो जागिर थिएन । ‘प्लान नेपालमा मेरो मान्छे छ, तिमीलाई त्यहीँ जागिर लगाइदिन्छु’ भन्दै आकर्षक जागिरको प्रस्ताव राखेपछि रिना केसीसँग आकर्षित हुँदै गइन् । अभिषेकले उनलाई फोन गर्दै भेट्न थाले । पटक–पटक रिनाको घर बर्दिबाससमेत पुगे । रिनाका बुबा छैनन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि आफूले सहयोग गर्ने भन्दै परिवारमा दया देखाए । भेटेको एक महिनामै रिनालाई बिहेको प्रस्ताव राखे । तर, रिनालाई केसीको गतिविधि शंकास्पद लाग्दै गएको थियो । ‘केसी र कार्की थर पनि मिलेको छ, यत्तिको केटा छाड्नुहुँदैन छोरी’ भन्दै आमाले भनेपछि रिनाले पनि उनीसँगै बिहे गर्ने सपना बुनिन् । मन जित्दै गएपछि उनले बिजनेसका लागि आकस्मिक रूपमा तीन लाख रुपैयाँ चाहिएको भन्दै पैसा मागे । आफ्नो पैसा सबै मुद्दती खातामा भएको नाटक गरेर उनले पैसा मागेका थिए । आमाले बर्दिबासबाट पैसा पठाएपछि रिनाले नै निकालेर केसीलाई दिइन् । पैसा लिएपछि उनी बेपत्ता भए । ‘सुरुमा नै यो मान्छे ठगजस्तो लागेको थियो,’ रिनाले सिआइबीमा भनिन्,‘तर आमाले कर गरेपछि विश्वास गरेकी थिएँ, विश्वासमा पर्दा दुःख पाएँ ।’ केसी पक्राउ परेपछि उनी उजुरी लिएर सिआइबी पुगेकी थिइन् ।
पोखरामा करोडौँ ठगी
पोखरामा मात्र २०–३० जनालाई उनीहरूले ठगी गरेको सिआइबीका इन्स्पेक्टर हरि बस्नेतले बताए । ‘एकै व्यक्तिलाई एक करोडभन्दा धेरै ठगी गरेकोसमेत बुझिएको छ,’ इन्स्पेक्टर बस्नेतले भने, ‘पोखराबाट धमाधम जाहेरी आइरहेका छन् ।’ त्यस्तै, लहानमा पनि धेरै महिला ठगिएको खुलेको छ । नेत्रप्रसाद छुटेको एक वर्ष मात्र भएको छ, जसमा उनीबाट ५० भन्दा धेरै महिला पीडित भएका छन् । चितवनमा प्रकाशचन्द श्रेष्ठ र गोपी दाहाललाई पनि उनीहरूले वैदेशिक रोजगार र व्यापारको लोभमा ठगी गरेका थिए । त्यस्तै, आफ्नै भाउजू पर्ने पञ्चमाया गिरीलाई भाटभटेनी सुपरमार्केटभन्दा राम्रो सपिङ सेन्टर खोल्ने भन्दै २१ लाख ४० हजार ठगी गरेका थिए । प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठलाई अफगानिस्तान पठाउने भनेर तथा दाहाललाई खाद्यान्नको व्यापारको नाममा ठगी गरेका हुन् । पोखरामा धेरैजसो लाहुरेका श्रीमतीहरू उनीहरूबाट पीडित भएका छन् । व्यापारमा लगानी गर्ने भन्दै पैसा मागेर धेरैलाई उनीहरूले पोखरामा ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सिआइबीमा भेटिएकी एक पीडितले भनिन्, ‘योसँग केही मोहनी हुनुपर्छ, कुरा गर्नेबित्तिकै पैसा दिऊँ दिऊँ जस्तो हुन्थ्यो ।’
पक्राउपछि रोकियो तेस्रो बिहे उनीहरूविरुद्ध उजुरीकै क्रममा एउटा अनौठो उजुरी आयो । चितवनमा एक महिलासँग रविनको बिहेको तय भइसकेको थियो । युवतीले बिहेका लागि कपडासमेत खरिद गरिसकेकी थिइन् । तर, हुनेवाला श्रीमान् एक्कासि सम्पर्कविहीन भएपछि उनी बेचैन भइन् । पछि, पत्रिकामा उनी पक्राउ परेको समाचार आएपछि मात्र आफूलाई ठगले फसाउन लागेको उनले थाहा पाएकी थिइन् । ती युवतीसँग पनि विभिन्न बहानामा उनले पैसा लिइसकेका थिए ।
एकै दोहोरीमा तीनजना गर्लफ्रेन्ड पछिल्लो समय उनीहरूले दोहोरी साँझ तथा डिस्कोमा काम गर्ने युवतीहरूलाई ठग्न थालेका थिए । एउटा आई–२० गाडी भाडामा लिएका थिए । आफूहरू धनी व्यक्ति भएको भन्दै भ्रममा पार्न उनीहरूले उक्त कार भाडामा लिएका थिए । रविनले नेत्र भर्खर अमेरिकाबाट आएको भन्दै युवतीहरूलाई झुक्याउने गर्दथे । दोहोरी र डान्सबारमा प्रायः न्यून आर्थिक अवस्थाका केटीहरू काम गर्ने भएकाले उनीहरू कार चढ्ने व्यक्तिसँग सजिलै प्रभावित हुन्थे । त्यहीकारण उनीहरूले पछिल्लो समय डान्सबार र दोहोरी साँझका केटीहरूलाई ठगेका थिए । बालाजुको एक दोहोरी साँझमा मात्र उनीहरूको तीनजना गर्लफ्रेन्ड रहेको खुलेको छ । तीनैजनालाई बिहे गर्ने र विदेश लैजाने भन्दै ठग्दै आएका थिए ।
डेरा पनि उनीहरू पटक–पटक सर्दथे । पछिल्लोपटक सीतापाइलामा बस्दै आएका थिए । जहाँउनीहरू हरेक दिन नयाँ–नयाँ युवती लिएर जाने गरेको छिमेकीले बताएका छन् । सीतापाइलाको सोही डेराबाट प्रहरीले म्याग्दीकी इन्दुको पासपोर्टसमेत बरामद गरेको छ ।
उनीहरूले आफूहरू दाजुभाइ भएको भन्दै नक्कली नाममा थर पनि दुवैले केसी राखेका थिए । उक्त गाडी पनि लामो समयसम्म भाडा नदिई चलाउँदै आएका थिए । सिआइबीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि मात्र धनीले गाडी फिर्ता लगेका छन् । पक्राउ परेका दुवैजना पहिला जेल परेका व्यक्ति हुन् । नेत्र वैदेशिक रोजगार ठगीमा त रविन अपहरण मुद्दामा जेल परेका हुन् । रविनले यसअघि दुईपटक अपहरण प्रयास गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूबीच कसरी भेट भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन । यात्राकै क्रममा भेटेको उनीहरूले बताएका छन् ।
दुवैजनाले प्रमाण लुकाउने गरी अपराध गरेका छन् । आफ्नो नाममा कुनै पनि सिम कार्ड निकालेका थिएनन् । युवतीहरूकै नाममा सिम कार्ड निकालेका थिए । एकजना व्यक्तिसँग एउटा मात्र सिम कार्ड प्रयोग गर्दथे । ठगिसकेपछि त्यो सिम कार्ड फालिदिन्थे । त्यसकारण पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई ६ महिना लागेको थियो । नयाँपत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
पक्राउ परेका दुवैजनाको दुई–दुईवटी श्रीमती रहेकोसमेत खुलेको छ । तर, दुवैले श्रीमतीहरूलाई भने वास्ता गर्न छाडिसकेका थिए । दुवैजनाको श्रीमतीको आर्थिक अवस्था भने कमजोर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मोजमस्ती गर्न उनीहरूले ठगी गर्दै आएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
गीत गाउँदै, युवती फकाउँदै, ठग्दै
पक्राउ परेकामध्ये रविन केसी उपनाम भएका ३५ वर्षीय रविनकुमार चिमोरिया लोकदोहोरी पनि गाउँछन् । मीठो स्वरमा गीत गाउने भएकाले त्यही कलाबाट उनले धेरै केटीसँग नजिकिएर ठगी गरेको सिआइबीका इन्स्पेक्टर हरि बस्नेतले बताए ।
खासगरी जेसिसका कार्यक्रम तथा पिकनिकमा जाने र आफू ठूलो मान्छे भएको भन्दै उनले प्रभावित पार्दथे । युवतीहरूलाई प्रभावित पार्ने विशेष कला उनीहरूसँग थियो । चितवनमा मात्र १० जनाभन्दा धेरै व्यक्तिलाई उनले ठगी गरेका छन् । जेसिसको एक पिकनिकमा जाँदा गीत गाएर महिलाहरूसँग नजिकिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
कसैलाई बिहेको आश्वासन दिएर त केहीलाई व्यापारको प्रलोभनमा उनले ठगी गरेका थिए । चितवनका दुई महिलाले उनीहरूबाट बर्बाद भएपछि आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेको प्रहरीले जनाएको छ । एक महिलाले विष नै सेवन गरेकी थिइन् भने अर्की महिला नारायणी नदीमा हाम फाल्न भनेर गएर पनि फर्किएकी थिइन् । विष सेवन गरेकी महिलाको समयमै उपचार हुँदा उनको ज्यान जोगिएको थियो । सिआइबीमा पुगेकी एक महिलाले आफू हाम फाल्न नारायणीमा पुगे पनि सन्तानको मायाले फर्किएको बताएकी छिन् । गिरी र चिमोरियाका कारण धेरैका परिवार बर्बाद भएका छन् ।
प्रमाण लुकाएर ठगी
उनीहरूले पैसा पनि प्रमाण नहुने गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा पठाउन लगाई लिएका छन् । पक्राउ परेपछि आफूहरूविरुद्धको प्रमाण कमजोर हुने भएकाले उनीहरूले यस्तो तरिका अपनाएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पक्राउ परेपछि उनीहरूले आफूहरूले पैसा लिएको अस्वीकार गर्दै आएका छन् । केही पीडितलाई भने सबै पैसा फिर्ता गर्ने भन्दै जाहेरी नदिन फकाउने गरेका छन् । नेपालमा ठगीसम्बन्धी कानुन कमजोर भएकाले गिरी र चिमोरियाले जेलबाट छुटेपछि यस्तो धन्दा गरेको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसरी ठगेको पैसा भने उनीहरूले क्यासिनो र दोहोरीमा उडाउने गर्दथे । गिरी रोमानिया पुगेका वेला क्यासिनोबाट पक्राउ परेका थिए । पछिल्लो समय भने उनी सिक्किमको माजोङ क्यासिनो गएर जुवा खेल्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्ता थिए ठगीका नवीन शैली
पैसावाल व्यक्ति सहभागी हुने कार्यक्रममा जाने, गीत गाएर तथा मिठा कुरा गरेर महिलासँग नजिकिने
विवाहित तथा अविवाहित युवतीलाई आफ्नो नाम–थर ढाँटेर म इन्जिनियर, व्यापारी हुँ भन्दै विभिन्न प्रभावमा पारेर आर्थिक तथा शारीरिक शोषण गर्ने
बिहे गर्ने वचन दिएर विश्वासमा पारी पैसा लिने, पैसा लिएपछि बेपत्ता हुने
डान्सबार, दोहोरी रेस्टुरेन्टमा गई आफू प्रतिष्ठित व्यक्ति भएको भ्रममा पारी युवतीलाई ठग्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम प्राप्त गर्दा आफ्नो पहिचान खुल्ने कागजात राख्नुपर्नेमा झुटो समस्या देखाउँदै अन्य व्यक्तिको कागजात पेस गरी रकम झिक्ने
ठगी गरी जम्मा भएको रकम मोजमस्ती गर्ने र विभिन्न देशमा गई क्यासिनोमा जुवा खेल्ने
2017-01-07 Related Articles कर्मचारी सरुवामा ‘पैसाको चलखेल’ 17 Sep 2016
प्रेम गरेको भन्दै वृद्ध जोडीलाई कुटपिट गरी गाउँ निकाला 24 Dec 2016
विन्ध्यवासिनी मन्दिर : पुजारी धनी, देवता गरिब 21 Sep 2016